ngomphathi ku 20-05-18
Ukusuka nge-15 ukuya kwe-17 kuMeyi, inkampani yethu yayiye kumboniso weVitafoods owawubanjelwe eGeneva, Switzerland. Umboniso ngumboniso wecandelo lezolimo kwishishini lokutya laseYurophu elinamashumi amawaka abathathi-nxaxheba. Ngalo mboniso, sinethuba lokuqhuba ubuso ngobuso ...
ngomphathi ku 19-07-27
Ukususela ngo-Oktobha 17 ukuya 18, 2019, inkampani yethu inxaxheba umboniso Supplyside West eyayibanjelwe e Las Vegas, isixeko esentshona United States. Umboniso ngumboniso wecandelo lezolimo kwishishini lokutya laseMelika, elinamashumi amawaka abathathi-nxaxheba. I-United States ine enkulu ma ...
Ukususela ngoSeptemba 11 ukuya 13, 2019, inkampani yethu inxaxheba kumboniso Ukutya Izithako Asia eyayibanjelwe e Bangkok, Thailand. Umboniso ngumboniso wecandelo kwishishini lokutya laseAsia, elinamashumi amawaka abathathi-nxaxheba. I-Thailand inamandla amakhulu okuthengisa, ngakumbi ...
Ukususela ngoNovemba 26 ukuya 28, 2019, inkampani yethu inxaxheba CPHI mboniso ebibanjelwe eNew Delhi, India. Umboniso ngumboniso oshishino olunempembelelo kushishino lokuxuba amayeza kunye nokutya, kunye namashumi amawaka abathathi-nxaxheba. I-Indiya inamandla amakhulu okuthengisa, ngakumbi kwi ...
Ukususela ngoNovemba 5 ukuya ku-7, 2019, siye bathatha inxaxheba kumboniso CPHI ebibanjelwe eFrankfurt, Germany. Umboniso ngumboniso oshishino olunempembelelo kushishino lokuxuba amayeza kunye nokutya, kunye namashumi amawaka abathathi-nxaxheba. IYurophu inamandla amakhulu okuthengisa, ngakumbi kwezemidlalo ...